Dowladda Soomaaliya oo Ciidamo Xoogga Dalka ah ka Sagootisay Muqdisho. – Goobjoog News
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sagootisay ciidama ka tirsan xoogga dalka kuwaas oo lagu tababaray xerada General Golden ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu wadaa iney ku biiraan ciidamada xoogga ee howlgaladda kawada gobalada kala wada dalka .
Ciidamaan oo aan la shaacin tiradooda ayaa dhawaanahaan waxaa ay ku sugnaayeen xerada ayaga oo qaanayaayey tababaro dhanka ciidanka intii ay ku sugnaayeen xerada tabarada ciidanka xoogga Generaal Goldan.
Ra’iisalwasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ciidamada kula hadlay xaruntii ay ka baxaayeen ayaa kula dardaarmay in ay ka qeyb qaataan howlgalada ka duwan ee ka socda guud ahaan dalka.
Ra’iisul Wasaaraha oo ballan qaaday in madaxda dowladda fedraalka ay dhammeystirayaan dhammaan agabka ciidanka ay u baahan yihiin sidoo kale waxaa uu saraakiisha iyo taliyaasha ciidanka kula dardaarmay inay ku dadaalaan sugnaanta xuquuqda ciidanka.
Xerada Generaal Golden ayaa waxaa ay ka mid tahay xarumaha lagu tabaro ciidamada xoogga dalka waxaana ka soo baxa sanad waliba ciidamo cusub kuwaas oo qeyb ka noqda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.